सहमतिमा अध्यक्ष दिनु हुन्छ भन्ने विश्वासमा छु : कुमार पन्त
सन् १९७६ गोर्खाको फुजेलमा जन्मेका कुमार पन्त गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आईसीसीको यहि अक्टोबरको १५ देखि १७ सम्म काठमाडौंमा हुने नवौं अधिवेशनमा अध्यक्षका आकाँक्षीहरुमध्येका बलिया उम्मेद्वारका रुपमा चर्चा भईरहेको छ ।
एनआरएनए आईसीसीमा अध्यक्षका उम्मेदवार पन्तसंग चुनावी परिवेश र आगामी योजनाको सेरोफेरोमा मातृ सन्देश डट कमको लागि गरिएको कुराकानी :-
० एनआरएनए आईसीसी उपाध्यक्ष सम्म आउदा यहाँले आफनो वाल्यकाललाई कसरी सम्झनु हुन्छ ?
–म सन् १९७६ मा जन्मेको हुँ । गोर्खाको फुजेल हालको गण्डकी गापामा जन्मिएर माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन गाउँकै स्कुलवाट गरेर उच्चशिक्षाको लागि म काठमाडौं आए उच्च माध्यमिक शिक्षा गरेसंगै विद्यार्थीको रुपमा सन् १९९७ मा यूरोपको ग्रिष्मा गए त्यहा सकेर जर्मनी गएका हुँ । मैंले औपचारिक शिक्षालाई राजनितिक शास्त्रमा स्नातक मैं विट मारे ।
० तपाईको एनआरएनए यात्रा कहिलेवाट सुरु भयो ?
– गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको सन २००३ को स्थापनासंगै म लागेको हुँ तर २००४ सालमा जर्मनमा एनआरएनए एनसीसी स्थापना भएपछि औपचारिक रुपमा सदस्य लिएर काम गरेको हो । यस संस्थामा प्रवेश भएवाट सन् २००९–२०११ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद आईसीसी सदस्य भए, युरोप क्षेत्रको संयोजकको जिम्मेवारी,सन् २०१३–२०१५ मा महासचिव भए र २०१५ वाट आईसीसी उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमाछु अहिले अध्यक्षको उम्मेद्धार हुँ ।
० एनआरएनए आईसीसी अध्यक्षमा तपाईंको आवश्यकता के का लागि ?
– यस पटक स्वाभाविक रुपमा मेरो उम्मेदवारी हो । प्रक्रियागत रुपमा र मुल्याङ्कनका आधारहरूमा टेकेर मैले अध्यक्षमा औपचारिक रूपले उम्मेदवारी दिएको हो । म उपाध्यक्षमा निर्वाचित भईसके पछि मेरो जिम्मेवारीमा निर्माणाधिन एनआरएनए भवन सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । उक्त कार्य सम्पन्न गरि गत डिसेम्बर महिनाबाट एनआरएनएको सचिवालय आफ्नै भवनमा संचालन भईरहेको छ । त्यसै गरि अर्को जिम्मेवारी भनेको बिभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका नेपाली बिज्ञहरुलाई एकै स्थानमा भेला गरि बिज्ञ सम्मेलन गर्नुपर्ने मलाई जिम्मेवारी थियो उक्त काम पनि मैले सफलताका साथ सम्पन्न गरि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको छु । अव संगठनले जिम्मा दिएका सबै काम ईमान्दारिताका साथ पुरा गरिरहेको छु ।
मैंले नेतृत्व पाएपद्धि नेपालमा एनआरएनएमैत्री नीति, नियम र संविधान बनाउन, लगानीको वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण, संसारभरिका एनआरएनएलाई स्वदेशमा आर्थिक–बौद्धिक लगानी एवं परोपकारी कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने अभियान चलाउने छु ।
० चुनावमा तपाईंको प्रतिष्पर्धा कोसंग रहन्छ ?
– अन्तिम समयसम्म सहमतिको प्रयास गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ । म सहमतिको लागि लागि पहिलेवाट नरम हुँदै आएको हुँ ।
सबैलाई सम्बोधन गरेर सहमति भयो भने एनआरएनएको इतिहासमा नयाँ अभ्यासको नजिर बन्ने थियो । हाम्रा अग्रजहरूले त्यसको प्रयास पक्कै गर्नुहुनेछ । मेरो प्रतिस्पर्धा कोहिसंग रहने छैन् सबै प्यारा साथीहरु हुनुहुन्छ सहमति हुनेछ । यदि त्यसो हुन सकेन भने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ ।
० एनआरएनएमा पैसाले चुनाव प्रभावित पार्छन भन्ने एदाकदा वाहिर आउछ सत्य के हो ?
– यो कुरा सत्य त हैन पैसाकोले चुनाव चलखेल हुँदैन । आर्थिक चलखेललाई सहारा बनाएर चुनावमा जित्ने आकांक्षा राख्यौँ भने वा हाम्रा विवेक, स्वाभिमान र दायित्वबोधलाई खरिद–बिक्रीको साधन बनायौँ भने हाम्रो संगठनको गरिमा त्यतिखेरै सकिनेछ । त्यसको लागि हामीले ठाउँको ठाउँ खबरदारी गर्नुपर्छ ।
० अघिल्लो ८औं सम्मेलनको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
– नेतृत्व क्षमता र आफ्नो जिम्मेवारी बोधबिना सचेत जनअभिमतलाई स्वीकार गर्दै चुनावपछि हामी एक परिवार जस्तो भएर हाम्रा परियोजना, अभियान र कार्यदिशाको एकरुपतामा संकल्पित हुँदै खटेका छौँ । हाम्रा अभियानहरूमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषदका साथीहरू, विभागका साथीहरू र एनआरएनहरूको अथाह पसिना बगेको छ ।
अघिल्लो चुनावी समीक्षा र कार्यकालको कुरा गर्दा समग्रमा संगठनभित्रको सुन्दर पक्ष नै प्रधान हो भन्ने मलाई लाग्दछ । कमजोरी त मानव सभ्यताका सिक्ने–सिकाउने आधारहरू हुन् । जसरी अघिल्लो निर्वाचनमा भवन जीलाई नेतृत्व स्वीकार गरेर छोडे यस पटक साथीहरुले मलाई सर्वस्वीकार्य गरेर अध्यक्ष दिनु हुन्छ भन्ने विश्वासमा छु । यसको लागि आम प्रवासी नेपाली र नेतृत्वकर्ता सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु ।
० एनआरएनएका अहिलेका मुख्य मुद्दाहरु के–के हुन ?
– एनआरएनको पहिलो विषय भनेको गैरआवासीय साथीहरुको अधिकार र संरक्षण नै हो । त्यस पछि नेपालमा लगानी भि¥याउने र आफ्नै देशमा केही गर्ने अवसर सृजना गर्नको लागि कम्पनी नै दर्ता गरि काम गरिहेरका छौं ।
लगानी कम्पनीमा गैरआवासीय नेपाली साथीहरुले मात्र शेयर किन्न पाउने गरि तयारी गरिरहेका छौं । यस सम्बन्धमा सानो रकम देखि ठुलो रकम सम्मको शेयर बिदेशमा बसेका नेपालीहरुले किन्न पाउने व्यवस्था सहित हामी अगाडी बढेका छौं । प्रवासी नेपालीहरुलाई सदस्यतातर्फ हामी आकर्षित गर्ने ,दोहोरो नागरिकता,स्वदेशमा लगानी,सबै एनआरएनहरुलाई एक्जुट बनाउने आदि छन् ।
० विश्वका ८० देशमा संगठन विस्तार गरिसकेको एनआरएनए सवैलाई समेट्न नसकेको आरोप छ नि ?
– गैरआवसीय नेपाली संघ एनआरएनए नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा विधिवत दर्ता भएको प्रवासीनेपालीहरुको एक मात्र साझा संस्था हो
कतिपय कारणले गर्दा जति समेटिनु पर्थ्यो त्यति नेपालीहरु समेटिन नसके पनि अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया जस्ता कतिपय मुलुकमा सदस्यता संख्या बढ्दो नै छ । एनआरएन सदस्यताको उपादेयता बारे हामीले जति बुझाउनुपर्थ्यो त्यति बुझाउन सकेनौं । त्यस दिशातिर अब हाम्रो ध्यान केन्द्रीत हुने छ । करीव ७ हजार भन्दा बढि कर्पोरेट हाउसहरुले एनआरएन कार्ड बाहकलाई डिस्काउन्ट सुविधा दिने भएका छन् भने यसैगरी अन्य थुप्रै सुविधाहरु बढाउँदै प्रवासी नेपालीहरुलाई सदस्यतातर्फ हामी आकर्षित गर्दै लैजाने छौं ।
– अब हाम्रो संगठनभित्र शैलीगत र कार्यक्रमित रुपान्तरणको जरुरी छ । नेपाल र डायस्पोराका नेपालीको सन्दर्भमा हाम्रा जिम्मेवारी थपिँदै गएका छन् । त्यसैले हामी सदैव भविष्यप्रति आशावादी बन्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
अन्त्यमा सबै एनआरएनहरू मेरा गुरु, सहकर्मी र साथीहरू हुन् । उनीहरूका सुझाव, सल्लाह र समीक्षाहरूले हामीलाई मार्गदर्शन गराउन हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु । यहाँलाई विशेष धन्यावाद ।
सांसदको प्रश्न : माथिल्लो तामाकोशीमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?